Posted on September 1, 2008 by cuttiepinkgold	Standard
odk@oufqkdifolrsm;cifAsm?usaemfjyKvkyfcJhwJh jrefrmbavmh*grsm;owif;eJ@ygwfoufvdk@ tenf;i,faqG;aEG;vdkygw,f? trSeftwkdif; ajym&&ifawmh 'Dpmudk usaemfjyefvnfa&;om;p&mudk ta}umif;r&Sdyg? (bma}umifhvJqdkawmh usaemfhowif; vHk;0rSm;,Gif;rSKr&Sdbl;vdk@ t}uGif;rJhvufcHxm;vdk@ jzpfygw,f?)odk@ayr,fh vGwfvyfpGm jyefvnfacsycGifh&Sdw,fvdk@ ,lqrdwJhtwGuf 'Dpmudka&;&jcif; jzpfygw,f?
tpuaepajym&&if 'Dowif;udk ra&;om;cif 3&ufavmuftvkdrSmuwnf;u 'Dowif;udk usaemf&xm;jyD; jzpfygw,f? ydkjyD;aocsmatmifeJ@ aoaocsmcsm CCee ajymEdkifr,fh owif;&if;jrpfawGudk vdkufvHpkaqmif;aecJhwmyg? 'Dowif;ra&;om;cif tenf;qHk; jrefrmjynfwGif;u bavmhvkyfaeolawGa&m bavmh*gawGeJ@eD;pyfolawGa&m 5a,mufxufrenf; pum;ajymjyD; jzpfygw,f? olwdk@wawGudk,fwkdifu olwdk@toHudkroHk;zkd@ uwdawmif;xm;ovkd yGJydwfcH&wmawmh aocsma}umif; ta}umif;jyef}um;cJhygw,f? 'ghtjyif jynfwGif;omru jynfyu bavmhvkyfaeolawGjzpfwJh rcifrif;aZmf ukdpsmef rarjidrf;wdk@udkvnf; pHkprf;ar;jref;jzpfcJhygw,f? (olwdk@vuf&Sdxkdif;EdkifiHrSm &Sdaeygw,f ar;}unfhvdk@ &ygw,f?) owif;vkyfr,fhae@rSm aoaocsmcsmajymEkdifwJh pme,fZif;orm;wOD;u ol@toHudkcGifhjyKa}umif;eJ@ eHrnfryg&if&ygw,fqdkwJh cGifhjyKcsufa}umifh tydwfcH&wJhta}umif; tJ'Dpme,fZif;orm;toHudk oHk;vkdufygw,f? olwa,mufxJeJ@ar;jyD;a&;&if raocsmrSmpdk;vkd@ tjcm;qef@usifzufaxmifhjzpfwJh }uD;rSK;usif;yr,fqdkwJh jrefrmEdkifiH uGefysKwmynm&Sifrsm;toif; zkef;eHygwf 652276udk xyfjyD;qufoG,fygw,f? owif;xJrSmoHk;xm;wJhtwkdif; tJ'D0efxrf;u jyKvkyfcGifhray;wm [kwfw,fvdk@ jyefajzwmudk tm;vHk;vnf; owif;xJrSm }um;}urSmyg? aemufowif;&if;jrpfwa,mufuawmh jrefrmbavmh*gwa,mufyg ?oluawmhtydwfcH&wJhtay: a0zefoHk;oyfwmyg?qkdawmh owif;udk jyefvnfoHk;oyfr,fqdk&if—1? tydwfcH&w,fvdk@ pme,fZif;orm;wa,mufuajymw,f2? }uD;rSK;usif;yr,fh jrefrmEdkifiH uGefjyLwmynm&Sifrsm;toif;u wm0ef&Sdolwa,mufu tydwfcH&w,fqdkwmudk twnfjyKajym}um;w,f?3? }um;aeowif;&if;jrpfwa,muf&Jh a0zefoHk;oyfcsufygw,f?qkdawmh 'Dowif;[m b,fae&murSm;,Gif;aeygovJ? tydwfrcH&wmudk tydwfcH&w,fvdk@ a&;&ifawmh usaemfhowif;trSm;yg? tck[mu wu,ftydwfcH&wmudk tydwfcH&wJhta}umif;a&;wmudk rSm;w,fqdk&ifawmh b,f[mawGrSm;ovJqdkwm wdwdusus tcsuftvufeJ@ a&;om;zkd@vdkygvdrfhr,f? &yfuGufxJuvlawGa&;ovdk ydkufqH&wdkif;vkyfae}uw,f pwJhtoHk;tESKef;awG oHk;zdk@roifhawmfyg? owif;wyk'fvHk;udk aoaocsmcsm jyefvnfem;axmifjyD;rS usaemfhxHudk pma&;om;apcsifygw,f? toHeJ@v$ifhwJh owif;wyk'fudk em;raxmifyJ 0'fqdkufrSma&;wmavmufeJ@ a0zefrqef;ppfapvdkyg? usaemfhowif;eJ@ygwfoufvdk@ 'DavmufyJ jyefvnfa&;om;vkdygw,f? 'Dowif;[m vHk;0rSm;,Gif;wJh owif;wyk'fr[kwfbl;qdkwmawmh rsufpdydwfrjiif;bl;qdk&if tm;vHk;odEdkifygvdrfhr,f? toHk;jyKxm;wJh rl&if;toHzdkifrsm;yg yl;wGJay;ydk@ vdkufygw,f?tm;vHk;udk aus;Zl;wifpGmjzifhxuf&mZm
Reply ↓	မောင်ဒိုင်းနှင့် ထက်ကို ရေးသည်။ on September 2, 2008 at 9:43 am said:
သိုဏ္ဍသက်ဆိုင်သူများခင်ဗျာ၊ကျနော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါများသတင်းနဲဏ္ဍပါတ်သက်လိုဏ္ဍ အနည်းငယ်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်၊ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ ဒီစာကို ကျနော်ပြန်လည်ရေးသားစရာကို အေ’ကာင်းမရှိပါ၊ (ဘာေ’ကာင့်လဲဆိုတော့ ကျနော့်သတင်း လုံးဝမှားယွင်းမှုမရှိဘူးလိုဏ္ဍ အ’ကွင်းမဲ့လက်ခံထားလိုဏ္ဍ ဖြစ်ပါတယ်၊)သိုဏ္ဍပေမယ့် လွတ်လပ်စွာ ပြန်လည်ချေပခွင့်ရှိတယ်လိုဏ္ဍ ယူဆမိတဲ့အတွက် ဒီစာကိုရေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊
အစကနေစပြောရရင် ဒီသတင်းကို မရေးသားခင် ၃ရက်လောက်အလိုမှာကတည်းက ဒီသတင်းကို ကျနော်ရထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ ပိုပြီးသေချာအောင်နဲဏ္ဍ သေသေချာချာ ဃဃနန ပြောနိုင်မယ့် သတင်းရင်းမြစ်တွေကို လိုက်လံစုဆောင်းနေခဲ့တာပါ၊ ဒီသတင်းမရေးသားခင် အနည်းဆုံး မြန်မာပြည်တွင်းက ဘလော့လုပ်နေသူတွေရော ဘလော့ဂါတွေနဲဏ္ဍနီးစပ်သူတွေရော ၅ယောက်ထက်မနည်း စကားပြောပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ သူတိုဏ္ဍတတွေကိုယ်တိုင်က သူတိုဏ္ဍအသံကိုမသုံးဖိုဏ္ဍ ကတိတောင်းထားသလို ပွဲပိတ်ခံရတာတော့ သေချာေ’ကာင်း အေ’ကာင်းပြန်’ကားခဲ့ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပက ဘလော့လုပ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့ မခင်မင်းဇော် ကိုဈာန် မမေငြိမ်းတိုဏ္ဍကိုလည်း စုံစမ်းမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ (သူတိုဏ္ဍလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိနေပါတယ် မေး’ကည့်လိုဏ္ဍ ရပါတယ်၊) သတင်းလုပ်မယ့်နေဏ္ဍမှာ သေသေချာချာပြောနိုင်တဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတဦးက သူဏ္ဍအသံကိုခွင့်ပြုေ’ကာင်းနဲဏ္ဍ နံမည်မပါရင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ ခွင့်ပြုချက်ေ’ကာင့် အပိတ်ခံရတဲ့အေ’ကာင်း အဲဒီစာနယ်ဇင်းသမားအသံကို သုံးလိုက်ပါတယ်၊ သူတယောက်ထဲနဲဏ္ဍမေးပြီးရေးရင် မသေချာမှာစိုးလိုဏ္ဍ အခြားဆန်ဏ္ဍကျင်ဖက်ထောင့်ဖြစ်တဲ့ ‘ကီးမှုးကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျုတာပညာရှင်များအသင်း ဖုန်းနံပါတ် ၆၅၂၂၇၆ကို ထပ်ပြီးဆက်သွယ်ပါတယ်၊ သတင်းထဲမှာသုံးထားတဲ့အတိုင်း အဲဒီဝန်ထမ်းက ပြုလုပ်ခွင့်မပေးတာ ဟုတ်တယ်လိုဏ္ဍ ပြန်ဖြေတာကို အားလုံးလည်း သတင်းထဲမှာ ‘ကား’ကမှာပါ၊ နောက်သတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကတော့ မြန်မာဘလော့ဂါတယောက်ပါ ၊သူကတော့အပိတ်ခံရတဲ့အပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်တာပါ၊ဆိုတော့ သတင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်—၁၊ အပိတ်ခံရတယ်လိုဏ္ဍ စာနယ်ဇင်းသမားတယောက်ကပြောတယ်၂၊ ‘ကီးမှုးကျင်းပမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပြူတာပညာရှင်များအသင်းက တာဝန်ရှိသူတယောက်က အပိတ်ခံရတယ်ဆိုတာကို အတည်ပြုပြော’ကားတယ်၊၃၊ ‘ကားနေသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ပါတယ်၊ဆိုတော့ ဒီသတင်းဟာ ဘယ်နေရာကမှားယွင်းနေပါသလဲ၊ အပိတ်မခံရတာကို အပိတ်ခံရတယ်လိုဏ္ဍ ရေးရင်တော့ ကျနော့်သတင်းအမှားပါ၊ အခုဟာက တကယ်အပိတ်ခံရတာကို အပိတ်ခံရတဲ့အေ’ကာင်းရေးတာကို မှားတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဟာတွေမှားသလဲဆိုတာ တိတိကျကျ အချက်အလက်နဲဏ္ဍ ရေးသားဖိုဏ္ဍလိုပါလိမ့်မယ်၊ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေရေးသလို ပိုက်ဆံရတိုင်းလုပ်နေ’ကတယ် စတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ သုံးဖိုဏ္ဍမသင့်တော်ပါ၊ သတင်းတပုဒ်လုံးကို သေသေချာချာ ပြန်လည်နားထောင်ပြီးမှ ကျနော့်ထံကို စာရေးသားစေချင်ပါတယ်၊ အသံနဲဏ္ဍလ$င့်တဲ့ သတင်းတပုဒ်ကို နားမထောင်ပဲ ၀ဒ်ဆိုက်မှာရေးတာလောက်နဲဏ္ဍ ဝေဖန်မဆန်းစစ်စေလိုပါ၊ ကျနော့်သတင်းနဲဏ္ဍပါတ်သက်လိုဏ္ဍ ဒီလောက်ပဲ ပြန်လည်ရေးသားလိုပါတယ်၊ ဒီသတင်းဟာ လုံးဝမှားယွင်းတဲ့ သတင်းတပုဒ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ မျက်စိပိတ်မငြင်းဘူးဆိုရင် အားလုံးသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ အသုံးပြုထားတဲ့ မူရင်းအသံဖိုင်များပါ ပူးတွဲပေးပိုဏ္ဍ လိုက်ပါတယ်၊အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ထက်ရာဇာ
(ထက်ရာဇာ။ ခင်ဗျား ဝင်းနဲ့ ရိုက်တာကို ကျုပ်ဇော်ဂျီပြောင်းပေးထားတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လောလောဆယ် ခင်ဗျားက မမေငြိမ်းတို့ နာမည်ကို ခေါင်းခံထားတယ်နော်။ ဟုတ်ပြီ။ မေးကြည့်မယ်။ ပြည်တွင်းက ခင်ဗျား ဘယ်သူ့ကို မေးလဲ ကျုပ်သိပါတယ်။မြတ်ခိုင်ဆီမှာ ရေးတဲ့ အထာတွေလိုတော့ သိပ်အကျင့်မပါနဲ့တော့ဗျို့။
Reply ↓	mmhomo on September 2, 2008 at 1:40 pm said:
ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေ က နိုင်ငံတော် အစိုးရတွေကို ဖဲ့ဖို့ လောက်သတင်းပဲရှာနေတာလားဗျာ။ ဖွတာတော့ဖွတာပေါ့ ကိုယ့် သတင်းကိုကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်ပဲရေးတာတော့လွန်တယ်ဗျာ။ http://www.peoplemediavoice.com/content/view/357/192/ မှာဖတ်ကြည့်စမ်းပါဗျာ။ သူများတွေ စောစောစီးစီး အမှန်ပြင်သွားတာကို လေ့လာစမ်းပါ။ သင်ယူစမ်းပါ
Reply ↓	ရက်ရာဇာ on September 2, 2008 at 2:49 pm said:
ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်သတင်းဘယ်လောက်ခိုင်လုံလဲ နဲနဲစမ်းစစ်သင့်တယ်ထင်တယ်။ ခုလို အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ကြီး ပြောပြီးတော့မှသတင်းမှားတွေဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲ နောက် နှစ်ဖက်ကြားမှာ ရန်တိုက်ပေးနေသလိုဖြစ်မနေဘူးလား။ ခုဒီသတင်းရေးတဲ့ သူ အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ကျွန်တော်မသိဘူး ကျွန်တော့်ထက်ကြီးချင်လဲကြီးမယ် ငယ်ချင်လဲငယ်မယ်ပေါ့ဗျာ။ သေချာတာတော့ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာန တစ်ခုကလူဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ထက် အသိအမြင်များတဲ့သူဖြစ်မယ်။အဲ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲပေါ့ဗျာနော့။ တစ်ခုတော့အကြံပေးချင်တာကတော့ (မိချောင်းမင်းရေကင်းပြမိသလိုဖြစ်မလားမသိ)အများရှေ့မှာချပြမယ့် သတင်းတစ်ခုက ဘယ်လောက်ခိုင်မာမလဲ သေချာစမ်းစစ်ကြည့်သင့်တယ်ထင်တယ်နော်။ ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ အရမ်းရှက်မှာပဲဗျာ။အဲဒီတော့ ပညာရှိပီပီ မှားနေတာလေးကိုဝန်ခံလိုက်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် MCPA ဖုန်းကိုဆက်ပြီးတော့ Seminar လုပ်ဖြစ်မဖြစ် သေချာမေးခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားပြောသလိုဘယ်သူမှမဖြေခဲ့တာသေချာပါတယ်ဗျာ။
Reply ↓	Pinkgold on September 2, 2008 at 3:49 pm said:
Reply ↓	soe on September 2, 2008 at 4:06 pm said:
Reply ↓	Pinkgold on September 2, 2008 at 4:21 pm said:
Reply ↓	mm thinker on September 2, 2008 at 5:56 pm said:
Reply ↓	Eye on September 2, 2008 at 7:36 pm said:
၁။ “အပိတ်ခံရတယ်လို့ စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ယောက်က ပြောတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်သူက ပိတ်တာပါလို့ အတိအကျ ပြောနိုင်ပါသလား။ အစိုးရဆိုရင် ဘယ်ဌာနရဲ့ တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါသလား။
Reply ↓	kyaw on September 2, 2008 at 8:37 pm said:
Reply ↓	မေသူပိုင် on September 2, 2008 at 9:38 pm said:
ထက်ရာဇာ မဟုတ်ဘူး ထက် ပြသဒါးပါဆုံဆည်းရာမှာသူ့ဖြေရှင်းချက်ကိုတွေ့လို့ပါသူမေးမြန်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ အန်တီခင်မင်းဇော် အန်တီမေငြိမ်း ကိုဈာန်တို့စီဘောက်မှာလဲ အော်ထားပါတယ် ပြည်တွင်းကလူတွေ က အကျပ်အတည်း ကြားထဲကနေ လုပ်ရတာပါ သူတုိ့သတင်းမီဒီယာတစ်ချို့(အကုန်မပါပါ)ငမ်းငမ်းတတ်သတင်းတွေလျှောက်ရေးလို့ ကိုနေဘုန်းလတ်တစ်ယောက်တော့ ထောင်ထဲေ၇ာက်သွားပြီ အခု ထက်ပြသဒါးကလဲ ဘယ်သူ့ကိုထောင်ထဲသွင်းချင်နေသေးလဲ ဆိုတာဘဲ မေးချင်တယ် ဒေါက်တာလွမ်းဆွေ ဘလောခ်မှာ ဘယ်တုန်း က ဘာအကြောင်းအင်တာဗျုးထားတာမှန်းမသိတဲ့သူ့ပုံကြီးကို သောက်ရှက်မရှိတင်လိုက်သေးတယ်
Reply ↓	* In Search of Truth * on September 3, 2008 at 5:42 am said:
မြွေကိုက်လို့သေတဲ့ ကိစ္စမှာ နအဖတာဝန်ယူသင့်တယ်ဆိုရင် ကိုထက်ရာဇာ သတင်းလိမ်ရေးတဲ့ကိစ္စ DVB အထက်ပိုင်းက လူကို နှုတ်ထွက်ဖို့မတောင်းဆိုသင့်ဘူးလား? ၀ါဒအတူတူဆိုရင် အဲလိုပဲလက်ပိုက်ကြည့်စတမ်းလား?😛 ဒီမို=နအဖ
ဒီမိုမီဒီယာတွေ အဲဒီသတင်းကို အမှောင်ချထားသလား? ဘာကြောင့်လဲ? ဒီမိုမီဒီယာတွေ လူအတုတွေသုံးပြီး တယ်လီဖုံး အင်တာဗျူးအတုလုပ်တဲ့အကြောင်းပါ မီးခိုးကြွက်လျှောက်ပေါ်ကုန်မှာ စိုးရိမ်နေလို့လား?😛
Reply ↓	ဗမာပြည်သား on September 3, 2008 at 6:40 am said:
Reply ↓	soe on September 3, 2008 at 3:39 pm said:
Reply ↓	chim on September 3, 2008 at 4:29 pm said:
Reply ↓	BlogGodFather on September 3, 2008 at 4:46 pm said:
Reply ↓	* In Search of Truth * on September 4, 2008 at 2:54 am said:
မြွေကိုက်တဲ့ ကိစ္စမှာ ဆရာဝန်ကို အလုပ်ဖြုတ်လို့ ဆူညံနေတဲ့ ဒီမိုသမားများ. . . . လူကိုခင်လို့ မူကိုပြင်တာ မသင့်တော်ပါ။ ကိုထက်ရာဇာကို အလုပ်ဖြုတ်တာထက် DVB အထက်ပိုင်းက လူတွေကို အနားယူခိုင်းပါ။ လူမြင်လို့ကောင်းအောင် မူလေးကုိုတော့ လေးစားကျပါဗျာ။ လူကိုခင်ပေမယ့် မူကိုမပြင်စေချင်သူဇော်မျိုး
Reply ↓	kyaw on September 4, 2008 at 3:37 am said:
ဇော်မျိုးပေါက်ကရတွေ ပြောမနေနဲ့ မင်းကြောင်တောင် တောင်နဲ့ ဘာမှမသိမှန်းသိတယ် အောကား (pron movie) တွေသွားကြည့် မင်းအဲဒါတွေဘဲကြိုက်တာ အဲဒီမှာအာဏာရှင်မရှိဘူး ဒီမိုငကြောင်တွေမရှိဘူး အားလုံးဘုံဘဲ အင်ကျီချွတ်ရတယ် ကြောင်ချေး ဘလော့ http://kokokyaungchay.blogspot.com/ နဲ့ မောင်သန်းရွှေဘလော့ http://mgthanshwe.blogspot.com/တွေသွားကွ
Reply ↓	chim on September 4, 2008 at 8:08 am said:
သူပုန်ဆိုတဲ့လူငါးခုံးမတစ်ကောင်ပုတ်ရင် တစ်လှေလုံးပုတ်တယ်ဆိုတာ မင်း ဘီဘီစီ အာအက်အေ ဗီအိုအေ အကုန်ပါလားပြော..မင်းတို့ေ၇းထားတာတွေက နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေလို့ အကုန်ပြောနေတာ..mmhomo ရေးထားတဲ့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေ က နိုင်ငံတော် အစိုးရတွေကို ဖဲ့ဖို့ လောက်သတင်းပဲရှာနေတာလားဗျာ ဆိုတာ ဘာစကားပြောတာလဲ နိုင်ငံတော်အစိုးရလို့နအဖကို တရိုတသေပြောနေတာကို ငါပြောတာ ဟေ့ကောင် ပြီးတော့ pingoldကလဲ ရှင်တို့ နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနတွေ ဘာကြောင့် ဘလောဂ့်ဂါကို အစိုးရနဲ့ ရန်တိုက်ပေးချင်တာလည်း.. ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် အေးအေးနေနေတာ မမြင်ချင်ကြဘူးလားလို့ပြောထားတယ် အစိုးရ နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ မင်းတို့ က တလေးတစား တရိုတသေ ဖင်မနေပြီး နအဖအကြိုက်စကားလုံးတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေလို့ အကုန် ချီးသုတ်ပြီး မရမ်းနဲ့လို့ ငါပြောတာ မင်းတို့ က တစ်ခုခုဆို အကုန်ဝိုင်းပြီး ရမ်းတုတ်နေတာတွေများနေတယ် ဘလော့ကာတွေထိမှာစိုးလို့ ပြောတာထက် အခုက နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကို အကွက်ဝင်တုန်း ၀င် ဆွမ်းကြီးဝင်လောင်းလိုက်မှ ဆိုတဲ့ အောက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ကို ပြင်ကွ…ငါက မင်းပြောတဲ့ ဒီဗွီဘီဝန်ထမ်းလဲ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့် မြင်နေရတာတော်တော် မဟုတ်လို့ ဝင်ပြောတာ တိုက်ရိုက်ပြောချင်ရင် မင်းလိပ်စာတင်လိုက် ငါမေးလ်ရှိတယ် လာခဲ့
Reply ↓	Zaw on September 4, 2008 at 1:31 pm said:
Reply ↓	ကိုမင်းကျော် on September 4, 2008 at 2:21 pm said:
Reply ↓	Zaw on September 4, 2008 at 2:57 pm said:
Reply ↓	Pinkgold on September 4, 2008 at 4:33 pm said:
Reply ↓	* In Search of Truth * on September 4, 2008 at 7:53 pm said:
Reply ↓	soe on September 4, 2008 at 11:48 pm said:
Reply ↓	ဒီဒီက on September 7, 2008 at 11:52 am said:
Reply ↓	သူရ on October 10, 2009 at 3:39 am said:
Top Posts	Environmental Protection by Youth Participation Conference	Recent Comments	mgmg on လွမ်းနေဆဲပါ သရေခေတ္တရာsnowlyjam on Regional Internet Governance F…ရခိုင်သူ on My Second Mother (or) Gra…cuttiepinkgold on London Trip to Attend One Youn…Andry Kira Casperov on London Trip to Attend One Youn…	Hit Count	hit counter